Waa Xilligii la Xulan Jiray Iskool Fiican!
Soomaali: School Choice 2021-22
Waxaa la joogaa wakhtigii la isku qori lahaa sannad-dugsiyeedka 2021-22! U hel lmahaaga iskool fiican, iyo xog ku saabsan qaabka loo codsado iyo goorta la codsado, su'aalaha soo noqnoqdo, taariikhaha booqashada iskoolka oo ah fiidiyow khadka intarnetka ah, iyo waxa cusub sannadka dambe.
Nidaamka Is-Qorista & Wakhtiga kama Dambaysta ah
Codsiyada mudnaanta leh ee sannad-dugsiyeedka 2021-22 waa Jimcaha, March 5. Adigoo codsigan buuxiyo taariikhdan cayiman ayaa ku siinaysa fursadda ugu fiican ee lagu galo iskoolka aad dooratay. Dhammaan ardayda xannaanada carruurta illaa fasalka 12aad ee ku nool St. Paul waxaa loo ballan qaadayaa inay boos ka helaan mid ka mid ah iskoolladeenna. Wixii Pre-K ah, ahmiyado qaas ah ayaa jiri karo, waxaana dhici karta in iskoollada qaar loo sameeyo liiska sugidda.
Arday kasta oo ka tirsan St. Paul wuxuu leeyahay iskool loo qoondeeyay xaafaddiisa oo ku saleysan cinwaankooda. Geli Raadiyaha Iskuulka (School Finder) fasalka uu dhigto ilmahaaga iyo cinwaanka gurigiisa ee si aad u hesho iskoolka xaafaddaada. Qalabkani wuxuu sidoo kale ku tusi doonaa dhammaan iskoollada u adeega aaggaaga, oo ay ku jiraan iskoollada magnetka ee heer gobol iyo degmo, iyo sidoo kale iskoollada ka baxsan xudduudahaaga gaadiidka.
Mar alla markii aad soo koobto xulashooyinka ku saleysan adeegyada iskoolka aad rabto, baahida gaadiidka iyo arrimo kale oo adiga muhiim kuu ah, waxaad arjigaaga ku qori kartaa laba iskool, adiga oo marka hore qorayo iskoolka koowaad ee aad xulan laheyd. Waxaa lagu la talinayaa qoysaska inay iskoolka xaafaddooda ka dhigaan mid ka mid ah labadooda xulasho. Mudnaanta koowaad waxaa leh ardayda codsato iskoolka xaafaddooda, waxaana ku xiga shuruudo kale oo meelaynta quseeya.
WAR CUSUB! Dhammaan Fasallada Pre-K waa Maalinta oo Dhan
Waxaa ku cusub sannad-dugsiyeedka 2021-22 in dhammaan fasallada Pre-K ay noqon doonaan maalin buuxda. SPPS waxay leedahay 35 barnaamijyo oo pre-K ah, oo ayna ku jiraan Montessori, luuqadaha la barto, barnaamijka International Baccalaureate iyo barnaamijyada iskoollada xaafadda.
Caruurta gaarta afar-jir 1-da Septembar, 2020, ee ku nool Saint Paul, waxay xaq u leeyihiin in lagu qoro barnaamijka Pre-K. Aqbalaadda Pre-K waxay ku xiran tahay hadba booska bannaan. Mudnaanta waxaa la siiyaa ardayda Barato Ingiriiska; ee xaq u leh cunto bilaash ah ama cunto qiimo jaban; ama ardayda hesho adeegyada Waxbarashada Gaarka ah ee Caruurnimada Hore (ECSE). Wixii xog dheeraad ah, booqo spps.org/prek ama wac Xarunta Meelaynta Ardayda 651-632-3760.
Jawaabta Hore ee Codsiga Xannaanada (Kindergarten)
Qoysaska xannaanada caruurta ee raba inay dhigtaan iskoolka xaafaddooda waxay heli karaan jawaab hore oo aqbalid ah haddii ay codsadaan ugu dambeyn Jimcaha, January 15, ama taariikhdaas ka hor. Haddii aad seegtid wakhtigan hore ee ah January 15, weli waad codsan kartaa iskoolka aad rabtid ugu dambeyn March 5 oo ah taariikhda mudnaanta leh. Ka dhig iskoolka xaafaddaada mid ka mid ah labada iskool ee aad ku soo qoreysid arjigaaga.
Booqashada Iskoolka oo Fiidiyow Khadka Intarnetka ah (Virtual Open House)
Dhammaan iskoolladu waxay qaban doonaan booqashada iskoolka oo ah fiidiyow khadka intarnetka ah sannadkan laga billaabo bisha January. Booqashada iskoolka oo fiidiyow khadka intarnetka ah waa fursad fiican oo aad wax badan kaga ogaan kartid iskoollada aad xiisayneysid. La kulan shaqaalaha oo soo ogow barnaamijyada, waxqabadyada iyo adeegyada uu heli karo ilmahaagu. Iskoollo badan ayaa sidoo kale duubi doono fiidiyow cusub oo ku tusinayo iskoolka iyo adeegyada yaallo adiga oo daawan karo xilli kasta ee aad rabtid.
Soo ogow maalinka aad rabtid inaad sameysid booqashada iskoolka oo fiidiyow khadka intarnetka ah kuna dar maalinkaas jadwalkaaga si aadan u hilmaamin inaad ka soo qeyb gashid.
Tababbar ku Taxalluqa Is-Qorista
Inaad iskool xulatid waa go'aan weyn, oo qaabka la isku diiwaan-geliyana wuxuu noqon karaa mid culeyskiisa leh. Xarunta Meelaynta Ardayda ayaa qaban doonta shan tababbarro oo khadka intaretnka ku bixi doono. Waxay ku saabsan yihiin isdiiwaangalinta iyagoo ku baxayo luuqado badan si lagaa ga caawiyo inaad fahantid nidaamka iskool-codsashada. Haddii aad seegtid tababbarradaan, wac ama su'aalahaaga email ahaan ugu dir Xarunta Meelaynta: 651-632-3760 ama spc@spps.org.